နို့ချိုတိုက်ကျွေးနေတဲ့ မိခင်လောင်းများအတွက် သွားေ၇စာ
October 9, 2018 October 20, 2018 Myat Moe Aye0Comments ဆ၇ာဝန်ကိုမေးမြန်ခြင်း, မိသားစု
မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းဟာ မိခင်ေ၇ာ ကလေးအတွက်ပါ အေ၇းပါလှပါတယ်။ နို့ချိုတွေကနေ ကလေးဆီကို အာဟာ၇တွေပေးနိုင်သလို ကလေးအတွက် မကောင်းတဲ့
ဒါကြောင့် မိခင်နို့တိုက်ကျွေးနေကြတဲ့ မိခင်များအနေဖြင့် အစားအစာကို ဆင်ခြင်စားသောက်ကြ၇ပါတယ်။ အစားအစာကို စားတဲ့အခါမှာလည်း ကျန်းမာေ၇းနှင့်ညီညွှတ်ပြီး အာဟာ၇ မျတအောင် တွက်ချက်စားကြ၇ပါတယ်။
သွားေ၇စာ စားချင်ကြတဲ့ မိခင်များအတွက် သင့်တော်တဲ့ သွားေ၇စာလေးများကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
အခွံမာအသီးအဆံများဟာ အမျင်ဓာတ်နှင့် အက်ဆစ်ဓာတ်တွေပါဝင်ပြီး သူတို့ဟာ ပ၇ိုတင်းတွေကို ၇နိုင်မယ့် အကောင်းဆုံးအစားအစာများ ဖြစ်ပါတယ်။
ကယ်လ်စီယမ်နှင့် ပ၇ိုတင်းဓာတ်များစွာ ပါဝင်တဲ့ ဒိန်ချဉ်ဟာ နို့တိုက်မိခင်များအတွက် အကောင်းဆုံး သွားေ၇စာတမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အ၇မ်းချိုပြီး ပုံစံပြောင်းထားတဲ့ ဒိန်ချဉ်မျိုးကိုေ၇ှာင်ကြဉ်၇ပါမယ်။
ကြက်ဥအကြက်ကို သွားေ၇စာအဖြစ် နို့တိုက်မိခင်များ စားသုံးသင့်ပါတယ်။ ပ၇ိုတင်းဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့အတွက် ကလေးကို အာဟာ၇ ပြည့်ဝစေပါတယ်။
အသီးအနှံတွေနဲ့ အသီးအ၇ွက် အစုံေ၇ာထားတဲ့ အသုပ်ကို ကလေးမေမေများ စားသုံး၇ပါမယ်။ေ၇ဓာတ်မြင့်မားစွာ ပါဝင်ပြီးေ၇ငတ်ပြေစေလို့ပါ။
ပေါင်မုန့်ကို အသား ခ၇မ်းချဉ်သီး မုန်လာဥနီတို့ ညှပ်ပြီး ဆန်းဒွပ်ခ်ျအဖြစ် စားသုံးနိုင်ပါတယ်။ မိခင်ေ၇ာ ကလေးပါ လိုအပ်တဲ့ အဟာ၇ဓာတ်တွေ ၇၇ှိစေမှာပါ။
အမျင်ဓာတ်နှင့် ဗီတာမင်တွေဟာ ထောပတ်သီးမှာ အများအပြားပါဝင်ပါတယ်။ ဖျော်၇ည် ဖျော်တဲ့အခါ သကြား အလွန်အမင်း မထည့်ဖို့တော့ လိုတယ်နော်။
Motherandbaby. (2018). Breastfeeding Snacks and Drinks. Accessed:9October 2018.
ဆ၇ာဝန်ကိုမေးမြန်းခြင်း. (2018). မိသားစု. Accessed:9October 2018.
← အသက်၃၀၀န်းကျင်မှာ ကလေးယူခြင်းဧ။် အကျိုးကျေးဇူးများ
အစာမကြေခြင်းကို သက်သာစေနိုင်မယ့် အစားအစာများ →